Manangana lanja amin'ny dingana rehetra amin'ny dia ataon'ny mpanjifanao. Martech Zone
Asabotsy Jolay 17, 2021 Asabotsy Jolay 17, 2021 Jim Berryhill
Fotoana lehibe ny fanidiana ny varotra. Io rehefa afaka mankalaza ny asa rehetra nanjary fametrahana mpanjifa vaovao ianao. Io no nanolorana ny ezaky ny olonao rehetra sy ny CRM ary ny fitaovanao MarTech. Io dia champagne pop-the-champagne ary miaina fofonaina.
Vao fanombohana ihany koa io. Ekipa marketing mialoha ny saina dia manohy ny fomba fitantanana ny Mpanjanantany. Saingy ny fifampiraharahana eo anelanelan'ny fitaovana nentim-paharazana dia mety hamela elanelana amin'ny fifandraisan'ny sonia amin'ny tsipika marimaritra iraisana sy ny fifampiraharahana amin'ny fanavaozana. Io no ahafahan'ny fitantanana ny lanjan'ireo mpanjifa manova ny fahasamihafana rehetra.
Izay efa ela no hita fa fitaovana fivarotana mahery vaika dia singa iray manan-danja ihany koa amin'ny fiantohana ny fahombiazan'ny mpanjifa. Nandritra ny fizotry ny varotra, ny fifantohana amin'ny sanda dia mety hametraka raharaham-barotra mazava ho an'ny vokatrao ary koa ny fepetra farafahakeliny ho an'ireo faritra misy fiatraikany lehibe indrindra amin'ny mpanjifanao vaovao. Raha tsy misy fanoloran-tena ho an'ny fikambanana manome lanja ny mpanjifa, mora ny tsy manararaotra mampiasa vola amin'ity fototra ity rehefa mihalalina ny fifandraisana. Noho izany, ny fananana fitaovana sanda azo ampiasaina amin'ny varotra sy ny ekipa fahombiazan'ny mpanjifa dia zava-dehibe tokoa.
Ny fampahalalana sy ny fahitana rehetra nangonina nandritra ny fizotry ny varotra dia afaka manaporofo fa sarobidy amin'ny fitantanana ny fananganana sy ny fampiakarana ny vokatrao. Rehefa dinihina tokoa, ny fahombiazan'ny mpanjifa dia miorina amin'ny hevitra manome lanja lanjany ho an'ny mpanjifanao.
Ny olana ho an'ny ankamaroan'ny ekipa fahombiazan'ny mpanjifa dia ny fomba hanamboarana an'io sanda io ary amin'ny fomba mahomby. Io no ahafahan'ny manana dashboard-n'ny sandan'ny fotoana natolotra izay mahavita ny fahasamihafana rehetra amin'ny fihazonana sy ny fifampiresahana indray. Raha tokony hilalao fiarovana, hampiasa fihenam-bidy, na hijaly amin'ny taha ambony, ny fitokisana amin'ny fitantanan-danja ny mpanjifa dia manome ny ekipa fahombiazan'ny mpanjifa hery hialana amin'ny sakana amin'ny fividianana nentim-paharazana, manamboatra ny fomba fivarotana / fivarotana amin'ny alàlan'ny ROI tena misy sy soatoavina. metatra.
Ohatra, ServiceNow, mpitarika amin'ny fanatsarana ny workflow niomerika, nametraka fitaovana fitantanana lanja ny mpanjifa ho an'ny ekipany manerana ny ekipa. Izany dia nahafahan'izay tompon'andraikitra tamin'ny hetsiky ny mpanjifa manisa sy mizara ny refy fandrefesana lalina. Vokatr'izany, ny olon-drehetra dia afaka nampiditra ny resadresaka nataony, ny fampisehoana ary ny fitaovany tamin'ny sanda azo refesina izay entin'ny ServiceNow ho an'ny mpanjifany. Vokatr'ireto ezaka ireto dia nanatsara ny tahan'ny fandresena tamin'ny hetsika 1.7X ny orinasa ary nampitomboina avo roa heny ny taham-pifanarahana amin'ny vintana fivarotana.
Ity dia fomba fahandro mazava momba ny famoronana mpanjifa mandritra ny androm-piainana, izay refy fahombiazana farany amin'ny fahombiazan'ny ekipanao ny dian'ny mpanjifa. Ny fanaovana soatoavina vato fehizoro amin'ny fifandraisana sy ny fifandraisan'ny fifandraisanareo dia singa iray ilaina amin'izany. Ny resadresaka sanda azo refesina dia manana fahefana hamaha haavo fifamofoana vaovao. Toy izao no ataon'ireo orinasa fifindrana amin'ny mpivarotra mankany amin'ny mpanolo-tsaina matoky. Ary amin'ny fanaovana izany, ny fivarotana fifampiraharahana sy fivarotana dia lasa resaka biolojika niainga avy tamin'ny fahitana avo. Amin'izany fomba izany dia lasa fiaraha-miasa maharitra sy lanja maharitra ny mpanjifa (LTV) sy ny vola miditra miverimberina (NRR) dia nohatsaraina fatratra.
Amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny sanda, ny orinasa dia manana ny hevi-baovao ilain'izy ireo hanararaotra ny ankamaroan'ny fifandraisana misy ary hampitombo azy ireo mifototra amin'ny fahatakarana iraisana ny fahombiazan'ny samy mpividy. Ny fifandraisana tsy tapaka momba ny sanda natolotra, fa tsy rehefa misy fanavaozana eo ambony latabatra na mitaraina ny mpanjifa, dia ahafahan'ny orinasa mametraka ny fototra mavitrika kokoa ho an'ny fifandraisana mandresy mandritry ny androm-piainany. Raha toa ny ekipa fahombiazan'ny mpanjifanao afaka manandratra ny resak'izy ireo amin'ny sehatra mpanatanteraka, ny resaka fanavaozana dia mety hifantoka amin'izay azonao atao manaraka sy miady hevitra amin'ny zava-bita taloha. Ny firesahana ny fitenin'ny lanja ara-bola sy ny lanja ara-bola no resahina. Izany koa dia mahatonga ireo fifandraisana ireo hifantoka kokoa amin'ny drafitra ho an'ny ho avy fa tsy hifampiraharaha sy hanamarina ny fifandraisana.
Ny soatoavina dia resadresaka mitohy
Rehefa miova ny filàna, mivoatra, manitatra ary manome pivot ny orinasa, izay manandanja ny lanjan'ireo mpanjifanao rehefa mandeha ny fotoana. Ny fitsidihana tsy tapaka ny fandrefesana ny mari-pahaizana dia ilaina ny ekipanao sy ny mpanjifanao. Ny ampahany amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa dia tokony hanombatombana sy hametrahana mari-pamantarana vaovao hahombiazana hahazoana antoka fa miara-mikasa ny ho avy ianao sy ny mpanjifanao. Io no votoatin'ny dia nataon'ny mpanjifa nizara.
Amin'ny alàlan'ny fametrahana lanja eo afovoan'ny dia ataon'ny mpanjifanao dia manana fomba mandresy lahatra ny ekipanao mba hananana fahombiazana ary hamorona faribolana mendrika ny sandan'ny mpanjifa. Ary ny valin'ny fampidirana sanda mandritra ny dia feno ataon'ny mpanjifa dia mazava: Nampitombo ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Fihenan'ny mpanjifa mihena. Isa avo indrindra ho an'ny mpanentana (NPS). Fandraisana vola miverimberina lehibe kokoa (NRR). Izany rehetra izany dia manampy amin'ny tombony ambany izay mahery, azo refesina ary misy dikany.
Tags: CRMMpanjanantanydia nataon'ny mpanjifafifandraisana amin'ny mpanjifafanatsarana ny workflow nomerikafitaovana fivarotanavarotra mandeha ho azy automatiqueservicenowWorkflow automationfanatsarana ny workflow
Jim Berryhill dia nandany 30 taona tamin'ny varotra rindrambaiko sy ny fitantanana varotra orinasa, nitarika ekipa nahavita be tao amin'ny ADR, CA, Siebel Systems, ary HP Software izay mifantoka amin'ny fivarotana sanda. Nanangana ny DecisionLink izy tamin'ny vina hahatonga ny mpanjifa hanome lanja stratejika amin'ny alàlan'ny fandefasana ny sehatra kilasy orinasa voalohany ho an'ny fitantanana lanja ny mpanjifa.